MADAGASIKARA MALALAKO: Jeneraly Rakotonandrasana Noël Nanao ampamoaka avy eny Tsiafahy
Ireo no nampita tamin’ny mpanao gazety an’izany ampamoaka anaty soratra izany. Mbola masiatsiaka noho ny an’ny Lietnà-Kolonely Charles Andrianasoavina izany na dia mifameno tanteraka aza. Tsy iza fa ny Jeneraly Noël Rakotonandrasana no namoaka izay tsiambaratelon’ny mpanongam-panjakana izay nosoratany tao anaty antontan-taratasy folo pejy. Notantarainy tao avokoa ny momba ny fanonganam-panjakana (taloha, nandritra ary taoriana) sy ny manodidina azy (ireo olona rehetra izay nandray anjara sy nikononkonona tamin’izany ary ny mpamatsy vola).
Raha fintinina dia nohamafisin’ity manamboninahitra jeneraly ity tokoa ny voalazan’ny lietnà-kolonely Andrianasoavina Charles fa tena fanonganam-panjakana no natao teto Madagasikara.
Ny tena nahatalanjona sy nampivarahontsana tamin’ity antontan-taratasy ity dia ny fanazavany ny momba ny “raharaha 7 febroary”. “Olona nokaramaina avokoa ireny nalefa teny Ambohitsorohitra ireny. Izany dia mba ho fanarahana ny soso-kevitry ny manamboninahitra iray izay nilaza fa tsy ho azo ny fanjakana raha tsy misy ra milatsaka. Dia nofitahina tokoa ireo olona ary nokaramaina mba ho...faty”, raha ny voarakitr’ilay sora-tanana. Marobe ny olona izay voatonona ao anatin’ity ampamoaka ity. Saika olona izay manana ny toerany eo amin’izao fitondrana tetezamita izao avokoa ireo. Raha tsy efa ministra dia manana toerana ambony ny ankamaroany.
Maro ihany koa ny manamboninahitra izay misy jeneraly maro izay voatonona.
Hatramin’ny bokonozatra na “gros bras” aza dia nambaran’ity jeneraly ity fa nandray anjara mavitrika tao anatin’ny raharaha. Mbola nisongadina ihany koa ny saika nidongian’ny miaramila izay anisan’ireo be galona indrindra eto amintsika ny fitondrana. Raha tsy nambanana basy io farany, niaraka tamin’ireo jeneraly roa namany, dia nalainy ny fitondrana.
Tsy nifanarahana hatrany am-boalohany anefa izany raha araka ny fanazavan’ny Jly Rakotonandrasana hatrany. Maro tsy voatanisa ary hita fa mipetrapetraka tsara sy manaraka ny vanim-potoana avokoa ny voalaza tao anatin’ilay atontan-taratasy izay nivoaka avy eny Tsiafahy ka tonga hatreny an-tanan’ny mpanao gazety. Mihabetsaka hatrany ankehitriny ny porofo fa tena fanonganam-panjakana no niseho teto amintsika ny taona 2009. Arahina izay mety ho fiantraikan’izany amin’ny tontolo politika...
Raharaha 07 febroary
jentilisa21 janvier 2011 à 11:03Aza miteny amiko rahampitso fa an'ny Lt-Cl Charles Randrianasoavina hay no nanoratra ilay taratasy folo pejy!!!RépondreSupprimerAnonyme28 janvier 2011 à 10:52Eny Tsiafahy sy tsy nifanaraka t@ TGV vao hoay a hoay ... Qu'ils assument tous leurs actes !RépondreSupprimerAnonyme15 février 2011 à 05:24Ts maitsy mivoka iany ny marina refa ts eo ambony seza tsony e, nahona ny sasany milamina tsara eo @ fitondrana moa ny sasany eny tsiafahy nefa samy nanao ny action daolaNy marina tsy maty eRépondreSupprimerAnonyme15 février 2011 à 05:28SAmy mizaka zay najinjany zao anRépondreSupprimerAnonyme9 janvier 2012 à 23:49ny miaramila ve tsy mba afaka manana ny heviny mintsy zany fa dé ampidirina amty resaka ty zany foana e, satria ve izy no manana basy dé lazaina fa tsy maty manota, manana ny fiandrihanany ny miaramila topoko fa adalanzay maty ny vola, mbô ataovy ambony ny niveua fidirana ao dé amzay tsika rehetra mlamintsaina fa olona iany ireo ary afaka mieritreritra e, leo ny vahoaka, tsy mahatoky an'iza n'iza tsony amzao ftoana zao! tsiaiko aloa nareo e!zay no mahatonga ny sasany hoe, aleonay ny zanakay ampianarina any ivelany fa toa tsy ho tafita eto raha izao foana no itondrana anty firenena ty!tttttsssssssRépondreSupprimerAjouter un commentaireCharger la suite...
Hafatra sy vaovao avy amin'ny Filoha Marc Ravalomanana: "Minoa fotsiny ihany! Ny marina dia marina foana"
Taorian'izay roa volana latsaka nanagadràna ny filoha Ravalomanana izay dia nahazo fahafahana hamangy sy hitsidika azy indray ny ...
Marc Ravalomanana: Fototra goavana amin'ny "Fampihavanam-pirenena" sy ny "Fampandrosoana" an'i Madagasikara
Asa mafy, asa tsara niteraka vokatra Iray volana androany izay no nangalàna an-keriny sy nanagadràna ny Filoha Marc Ravalomanana any ...